यसरी मा’रि’एको रहेछ दुई प्रहरीलाई ! पक्राउ परेकाले दिए यस्तो वयान - Alert Khabar
Homeसमाचारयसरी मा’रि’एको रहेछ दुई प्रहरीलाई ! पक्राउ परेकाले दिए यस्तो वयान
काठमाडौ । निधन भएको अवस्थामा भेटिएका असई गोविन्द विक र प्रहरी जवान टेकवहादुर साउँदलाई घेराबन्दी गर्दै फरुवाले ‘हा’नेर ‘ह’त्या गरेको पक्राउ परेकाहरुले बताएका छन् । प्रहरीले पक्राउ गरेका व्यक्तीहरुले धनगढी उपमहानगरपालिका–१२ जुगेडा स्थित अस्थायी प्रहरी चौकीका ईञ्चार्ज असई गोविन्द बिक र प्रहरी जवान राम बहादुर साउँदको ‘ह”त्या गरेको स्वीकार गरेका हुन् ।
उनीहरुले फरुवाले आ’क्र’म’ ण गरी दुबै जनाको ह’ त्या गरेको प्रहरी समक्ष बयान दिएका छन् । दुबै जनालाई ‘ह’ त्या गरी मोहना नदीमा फालेको समेत उनीहरुले स्वीकार गरेका छन् । प्रहरीले पक्राउ गरेका १६ जना मध्ये ६ जनाले घटनामा आफ्नो संलग्नता भएको स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ । संग्लनता स्वीकार गरेका ६ जना र अन्य १० जनालाई अलग राखेर अनुसन्धान भईरहेको छ ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–१२ जुगेडा स्थित अस्थायी प्रहरी चौकीका ईञ्चार्ज असई बिक र प्रहरी जवान शनिवार राति गस्तीमा गएको बेला वडा नम्बर १० जुगेडाबाट बे’प’ त्ता भएका थिए । भारतीय गाउँ सलियापार र वनकट्टीसंगै जोडिएको मोहना नदीको घा ट भएर तस्करी गर्नेहरुले दुवै जनाको नि’र्म’ म तरिकाले ‘ह’त्या गरेको प्रहरी स्रोतले बतायो ।